Aya ndiwo maApple Store ayo Apple achavhura mune yepakati nepakati refu | IPhone nhau
Nezuro takakuunzirai chinyorwa chakazara nezveApple Stores iyo Apple yakanga yasimbisa gore rino 2016. Asi kana iyo Cupertino kambani ichifarira chimwe chinhu chakavanzika, saka, izvi hazvifanire kunge zviri izvo chete zvitoro zveApple izvo zvinovhura windows windows avo mukati megore rino. 2016. Uye kambani iri panhongonya yekutengesa uye zvinyorwa izvo zvingangodaro zvisingakwanise zvakare mune imwe nguva, saka ingangove ndiyo nguva yekudyara mune iyi mhando yezvivakwa. Ngatitorei ongororo nezveApple Stores iyo yakave nerunyerekupe mumwedzi ichangopfuura uye yeiko simbiso inotarisirwa mukati megore rino.
Apple iri kuwedzera kwazvo Apple Store yayo muAsia, uye inotevera tarisiro iSouth America, asi haikanganwe nezve kondinendi yakare. Europe ichave zvakare iri nyaya yekumwe kuvhurwa mukati megore rino uye rinotevera gore, zvirinani ndidzo nzira iyo vaongorori vanga vachida kufunga uye makuhwa anozvinongedzera. Nekudaro, isu tinowana zvitoro zvakapararira kutenderera pasirese, isu tinotanga nekuongorora kwedu kwekuda kuziva kweApple Stores iri kutaurwa nerunyerekupe, kuti urege kupotsa zvachose dzidziso. Yambuka minwe yako, guta rako richiri pachinyorwa
Guta rekupoda, zvigadzirwa uye zvakasarudzika mhedzisiro. Los Angeles, glamour uye bizzarrismo zvakaenzana, haigone kupotsa Apple Store iri pabasa. Makuhwa anoti Apple yaizovhura Apple Store yayo munzvimbo yechiratidzo, mudunhu renhoroondo reBroadway Trade Center, kutora mukana wechivakwa chinonakidza asi chakamanikana chekutengesa. MunaNovember wegore rapfuura runyerekupe rwakanongedzera kuTower Teatre pakati pe8th uye Broadway, nzvimbo yakanaka. Iyo inozivikanwa cinema, nzvimbo yayo yakabatikana uye mavakirwo, zvinoenderana nezvose zvinokumbirwa neApple yenzvimbo yakadaro.
Nzvimbo yekutengesa muWorld Trade Center itsva ichavhurwa pakati pa2016, uye zvinoita sekunge zvitoro zvayo zvichasanganisira Apple Store, munzvimbo inoenderana netsika yeNorth America. Chitoro ndaizoperekedza zvimwe zvitoro zvitanhatu (hapana chimwezve uye hapana chakaderera) icho Apple yakavhura muManhattan, pamusoro peavo inotarisira kuvhura muBrooklyn uye yakagadziridzwa Bronx, inoita kunge isina kunyura mumatambudziko sezvazvaive mumakore ekupedzisira makumi masere uye kutanga kwema90.
Chishoma cheZuva zvakare reApple Chitoro. Guta remichindwe uye rinogashira Apple Chitoro kupera kwa2016, sekureva kweshumo rakaburitswa South Florida Bhizinesi Chinyorwa muna Kukadzi wegore rino. Ichavhura paBirckell Guta Center, nzvimbo nyowani yekutengesa mudunhu reMiami. Ichaperekedza zvimwe zvitoro zvina izvo Apple anazvo muMiami.
Kutanga mira muEurope, Belgium yakasarudzwa. Kubuda kwe iCulture, Mutapi venhau veGerman vanotaura nezvenzvimbo iyi yeApple Store, pamwe imwe yeanonyanya kufarira, chimiro chekuvaka chakashamisa, pakakwirira kweSol Apple Store muMadrid.
Muna Ndira wegore rino, iyo webhusaiti yeGerman Apfelpage, (sekuoma kunyora kunge zvese zvese zveGerman) zvakatumirwa nezve chivakwa icho chingangodaro chiri kuvakwa pamisimboti yeApple Chitoro. Iri munzvimbo yemari yeBerlin, chitoro ichi chichava chakavhurwa pakona yeRosenthaler Street neSpandau Bridge. Nekudaro, iyi haisi iyo nzvimbo yakasimbiswa.
Guta rerudo rinodawo Apple. Iine itsva uye runyerekupe Apple Chengetedza hapana chimwe uye hapana chakaderera pane padhuze nechiratidzo Champs Elysees. Apple yakasayina makore gumi nemaviri ekurenda chitoro munzvimbo ino sekureva kwepepanhau Le Figaro. Panguva ino, Zvave nerunyerekupe kubvira 2012 asi zvakadaro hazvivhure, inotarisirwa zvakanyanya kana zvishoma kune gore ra2018, zvinhu zvingani zvinogona kuitika panguva ino. Dhizaini ichaitwa neasina mumwe kunze kwechikwata chaNorman Foster.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Aya ndiwo maApple Stores ayo Apple achavhura maererano nerunyerekupe
Apple inoderedza mitengo ye iPhone muJapan ne10%